स्वास्थ्य पेज » ‘सेक्स’ गर्दा महिलाले किन निकाल्छन् आवाज ? ‘सेक्स’ गर्दा महिलाले किन निकाल्छन् आवाज ? – स्वास्थ्य पेज
‘सेक्स’ गर्दा महिलाले किन निकाल्छन् आवाज ?
यो सबलाई थाहा छ कि, सेक्सले वैवाहिक जीवनलाई सुखद र आनन्दमय बनाउँछ। सेक्स शारीरिक सुखका लागि मात्र नभएर यसले मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
वैवाहिक जीवनलाई सुखद र रोमाञ्चक बनाउन तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई यो विश्वास दिलाउन जरुरी छ कि, तपाईं सेक्समा आनन्द लिइरहनु भएको छ।
सेक्सका दौरान जब महिलालाई चरम सुखको अनुभुति हुन्छ उनीहरुको मुखबाट आफैं आनन्दका स्वरहरु सुनिन थाल्छन्। यसले पुरुषले थाहा पाउन सक्छन् कि उनले सेक्सबाट भरपुर आनन्द लिइरहेकी छिन् भन्ने।
तर, धेरै महिलाहरु यस्ता आनन्दका स्वरहरु निकाल्न लजाउने गर्छन्। यसले पुरुष पार्टनरलाई महिलाले आनन्द पाएकी छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन कठिन हुन्छ। तसर्थ यदी तपाईं महिला हुनुहुन्छ भने यस्ता स्वर निकाल्न नलजाउनुस्। यसकारण तपाईंको पुरुष पार्टनरले सेक्सको आनन्द लिइरहेको थाहा पाउने छ र खुसी हुँदै सेक्सलाई अझ सुखमय र आनन्दमय बनाउने प्रयास गर्नेछ। जसले तपाईं दुवै जनाको यौन जीवनलाई स्वर्गीय बनाउने छ।
महिलाले आवाज निकाल्दा यसले पुरुषलाई अझ उत्तेजित पनि बनाउन सहयोग गर्छ। यसका अलावा कतिखेरै महिलालाई सेक्स गर्ने इच्छा भइरहेको हुन्छ तर, भन्न लजाइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा केही शारीरिक क्रियाकलाप तथा हाउभाउबाट सेक्सको इच्छा व्यक्त गर्न सकिन्छ।
जस्तो कि, पुरुष पार्टनरलाई आकर्षित गर्ने सेक्सी भित्री लुगा लगाएर बन्द कोठामा उसलाई अंकमाल गर्न सकिन्छ, सेक्सी कुरा गर्न सकिन्छ भने उसको शरीर सुमसुम्याउन सकिन्छ। जसले गर्दा पुरुष पार्टनरले महिलाको सेक्स आवश्यकतालाई सहजै बुझ्न सक्छ र क्षणभरमै उत्तेजित हुन सक्छ।